APICMO - APICMO ihlanganiswe
Umbhali woLondolozo lweencwadi: APICMO
APICMO 撰寫 的 文章
Ngokuphathelele umbhali APICMO
06 / 05 / 2019Ngeposi ngokuthi: APICMOUdidi: Ulwazi lwezokwelapha0 azithandayo
Fumana indima ye-GM1 kwi-physiology ye-neurological, iipropati zayo zokuguga, kunye nemiphumo yeklinikhi kwiinkqubo eziphakathi kunye neendlela zokuphazamiseka.
Yintoni iMonosialotrahexosylganglioside Solidum (GM1)
I-sodium ye-Monosialotetrahexosylganglioside isisombululo se-neurotrophic's abbreviation GM1. Qhubeka Reading
I-Pyridine iyinxalenye ebalulekileyo ye-heterocyclic i-aline kind. I-Pyridine ivela kwi-benzene ngokutshintshwa kweqela le-CH nge-N-athomu. Isakhiwo sePyridine sifana nesakhiwo se-benzene, kuba idibene nokutshintshwa kweqela le-CH nge-N. Ulwahluko olukhulu luquka:
Konke okumele ukwazi nge spiro compounds
I-spiro ihlanganisi yinkomfa yendalo apho amabini amabhayisiki e-bicyclic anamathele nge-atom enye. Ngokwemvelo, izakhiwo zamasongo zinokuba zifana kunye okanye zihluke, kwaye i-athomu edibanisa iicandi zombini kuthiwa i-spiroatom (i-atom ye-spiral), ngokuqhelekileyo I-grade 4 carbon (eyaziwa ngokuba yi-carbon carbon), kwaye inokuthi Kwakhona i-silicon, i-phosphorus, okanye i-arsenic
I-2-Chloro-5-methylpyrimidine: I-CAS (Iinkonzo zeMichiza zeMichiza) Inani leRejista 22536-61-4
08 / 18 / 2018Ngeposi ngokuthi: APICMOUdidi: Ulwazi lwezokwelapha0 azithandayo
I-2- I-Chloro-5 i-methylpyrimidine ine-powder yellow yellow crystalline ibonakala kwiqondo lokushisa. Abanye baza kuchaza umthunzi wombala njenge-white-off. Akunakho ivumba kunye nesisindo somzimba we-128.56 grams nganye. I-formula yekhemikhali yayo ichazwa njengeC5H5CIN2 kunye ne-Simplified Molecular System - Input Integration System (SMILES) njengeCC1 = CN = C (CL) N = C1. I-compound ine-melting point ephakathi kwe-89-92 degrees centigrade, kunye nenqaku elibilisa le-239
07 / 19 / 2018Ngeposi ngokuthi: APICMOUdidi: Umxholo we-CMO1 Comment0 azithandayo
Ngaphezulu kwama-10 amava osebenzayo kwintsimi ye-chemical synthesis synthesis, esebenze kwi-GSK, enoxanduva lokuthengisa eNyakatho Melika, uye waphumelela iziphumo ezintle.
Ukutshata Ukuthengisa kweCopper & Advertising
07 / 18 / 2018Ngeposi ngokuthi: APICMOUdidi: Umxholo we-CMO1 Comment0 azithandayo
Abaphumelele kwiSebe lezendalo, iYunivesithi yeStford, iSyunivesithi yaseStanford
Zhaosen Zeng Ph.D. i-curriculum vitae
07 / 18 / 2018Ngeposi ngokuthi: APICMOUdidi: Ulwazi lwezokwelapha2 Comments0 azithandayo
Izakhono ezigqwesileyo kwiimeko zobungcali be-heterocyclic compounds. Unamandla ekusebenziseni umxube we-reagents kunye nobuchule obusetyenjini lwe-benzonitrile, i-phenol, i-naphthol, i-coumarin, i-thiocoumarin, i-quinoline, i-quinozoline, i-pyrimidine, i-pyridine, i-indole, i-indazole, i-Imidazole kunye ne-benzimidazole i-heterocycle.